राजिनामा दिएका कप्तान पारस खड्कालाई किन यसो भने सन्दिप लामिछानेले ? – Etajakhabar
राजिनामा दिएका कप्तान पारस खड्कालाई किन यसो भने सन्दिप लामिछानेले ?
काठमाण्डाै / नेपाली क्रिकेट टिमका लेगस्पिनर सन्दीप लामिछानेले पारस खड्कालाई सुखद् भविष्यको शुभकामना दिएका छन् ।कप्तान खड्काले पदबाट राजीनामा दिएपछि सन्दीपले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत नेपाली क्रिकेटमा पारसको योगदान ठूलो रहेको उल्लेख गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘तपाईँको नेतृत्वमा नेपाली क्रिकेटले ठूलो उपलब्धि हासिल गरेको छ । जुन पहिला कहिल्यै हासिल गरेको थिएन, मलाई र धेरै युवाहरुलाई प्रेरित गर्नुभयो ।’
सन्दीपले नेपाली क्रिकेटका लागि अझैं पनि पारसको कप्तानीको आवश्यकता रहेको बताए । उनले भने, ‘तपाईँको भविष्यका प्रयासका लागि हार्दिक शुभकामना र हामी तपाईलाई सकेसम्म धेरै बर्ष नेपालको प्रतिनिधित्व गरेको देख्न चाहन्छौँ । तपाईँ साँच्चिकै एक लेजन्ड हुनुहुन्छ जसले हामी सबैकाे हृदयमा ठूलो छाप पारेको छ, द लिजेन्ड पारस खड्का ।’
पढ्नुहोस् सन्दिपको स्टाटस् :तपाईंको नेतृत्वको अन्तर्गत यात्रा सुरु गर्दै हामी त्यस्ता स्थानहरूमा पुगेका छौं जुन नेपाल क्रिकेट पहिले पहिले कहिल्यै नसकेको थियो। तपाईंले विगतका वर्षहरूमा मलाई र धेरै युवाहरूलाई प्रेरित गर्नुभयो र हामीलाई यो सुन्दर खेललाई प्रेम गर्न सबै कारणहरू दिनुभयो। तपाईको भविष्यका प्रयासका लागि हार्दिक शुभकामना र हामी तपाईलाई सकेसम्म धेरै बर्ष नेपालको प्रतिनिधित्व गरेको देख्न चाहन्छौं! तपाईं साँच्चिकै एक लिजेन्ड हुनुहुन्छ जसले हाम्रो सबै हृदयमा ठूलो छाप पारेको छ। यहाँ तपाईं क्याप्टेन हुनुहुन्छ! द लिजेन्ड दाज़ु पारस खड्का ।
नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको कप्तानबाट राजीनामा दिएका पारस खड्काले आफ्नो निर्णय एक्कासि नभएको बताएका छन्। मङ्गलवार सामाजिक सञ्जालमा राजीनामा दिने घोषणा गरेपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले आफूले १० वर्ष कप्तानी गरिसकेको र “विगतको समयमा जसरी क्रिकेट अगाडि बढिरहेको छ” त्यो हेरेर आफूले राजीनामाको निर्णय गरेको बताएका छन्। उनले भने: “मलाई जहिले पनि उच्च स्थानमा हुँदा नै छोड्न मन थियो… मलाई लाग्यो नयाँ नेतृत्व आएको बेला यो सही समय हो।”
तर उनले अझै क्रिकेट भने खेल्न चाहेको बताएका छन्। “क्रिकेट छोडिहाल्ने होइन, म खेलाडीको रूपमा अझै योगदान गर्न सक्छु।” अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी) ले नेपाल क्रिकेट सङ्घ (क्यान) को निलम्बन फुकुवा गर्दै ससर्त सदस्यता दिने निर्णय गरेको भोलिपल्ट खड्काले कप्तान पद छोड्ने धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्। सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै ३२ वर्षीय खड्काले क्यानको नयाँ कार्यसमिति, खेलाडी र अन्य साझेदारले नेपाली क्रिकेटमा राम्रो गरून् भन्ने कामना गरेका छन्।
उनले नेपाली क्रिकेटमा ‘सबै कुरा नयाँ सुरु हुनुपर्ने’ बताउँदै कप्तानी छोड्ने समय भएको बताएका छन्। सन् २००२ मा यू-१५ टोलीबाट क्रिकेट खेल्न थालेका उनले सन् २००९ देखि नेपाली राष्ट्रिय टोलीको नेतृत्व गर्दै आएका थिए। पारस खड्काले नेपालको तर्फबाट छवटा एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय एवम् २७ वटा टी-२० अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलिसकेका छन्।
उनले नेपालको राष्ट्रिय टोलीबाट ४० वटा अन्य एकदिवसीय खेल र ५० वटा टी-२० खेल खेलेका छन्। उनले नेपालको यू-१५ र यू-१७ टोलीहरूमा खेल्नुको साथै तीन पटक यू-१९ विश्वकप खेलेका छन्। खड्काले आफ्नो सक्रिय खेल जीवनपछि क्रिकेट प्रशासनको नेतृत्व तहमा र परिस्थितिले साथ दिएमा राजनीतिमा पनि जान सक्ने बताएका थिए। नेपालको क्रिकेट प्रशासन चर्को राजनीतिबाट प्रभावित भएर आईसीसीबाट प्रतिबन्धित भएको बेलामा पनि खड्काको नेतृत्वमा राष्ट्रिय टोली कायम थियो।
उनी मैदानभित्र कप्तान भएकै बेला मैदानबाहिर राष्ट्रिय टोलीका एक छनोटकर्ता थिए। क्यान निलम्बित भएको समयमा उनले आईसीसीसँग पत्राचार गर्ने समन्वयकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेका थिए। “पहिले म मेचीदेखि महाकालीसम्म पुगेर त्यहाँको वातावरण क्रिकेटमय बनाउन चाहन्छु। अभिभावकहरूले छोराछोरीलाई ‘क्रिकेटर बन’ भन्ने अवस्था आओस् भन्ने मेरो इच्छा हो,” गत वर्ष उनले बीबीसीलाई भनेका थिए।”त्यो सब गरिसकेपछि परिस्थितिले दिन्छ भने ह्वाई नट पोलिटिक्स?”
Posted on: Tuesday, October 15, 2019 Time: 20:26:39
-10704 second ago
-8840 second ago
-8024 second ago
-6934 second ago
-1786 second ago
-517 second ago